Sida loo soo dejisto Windows 10 bilaash ah oo taxane ah | Wararka Gadget
Shalay mid ka mid ah wararka ugu muhiimsan ayaa loo sii daayay dhammaan kuwa ku shaqeeya nidaamka ka shaqeeya Windows-ka kumbuyuutarradooda shaqsiyeed; Qaab la taaban karo, magaca cusub ee nidaamka qalliinka ee la heli doono laga bilaabo bartamaha 2015 ma noqon doono kii horay loogu hadal hayay degellada kala duwan ee halkii laga rabay, Windows 10.
Tiro aad u tiro badan oo sheekooyin ah ayaa la sii daayay oo ay ka mid ahaayeen, qaarkood waxay noqdeen gebi ahaanba sheeko xumo iyo xiiso, isku mid ah waxaan kuu soo jeedinaynaa inaad aqriso waayo, markii aad haddaba gacanta ku hayso Windows 10kan, wax si fiican u noqon kara waqtigan maqaalkani wuxuu ku bari doonaa inaad kala soo baxdo noocyadan cusub ee nidaamka qalliinka gebi ahaanba bilaashka ah oo ay ku jiraan nambarka taxanaha ah.
1 Maxaan ubaahanahay inaan kala soo baxo Windows 10 oo ay ku jiraan lambar taxan ah?
2 Beddelka lagu rakibo Windows 10
Maxaan ubaahanahay inaan kala soo baxo Windows 10 oo ay ku jiraan lambar taxan ah?
Microsoft ayaa ku dhawaaqday shalay mid ka mid ah bayaankeeda, taas oo ah, taasi qof walba wuu soo dejisan karaa nooca ugu dambeeyay ee nidaamka qalliinka (Windows 10), si ay u tijaabiyaan ulana jaanqaadaan faa'iidooyinka cusub ee dib-u-eegistu bixin lahayd. Sababtaas awgeed, ma jiro nooc xaddidan oo ku saabsan isticmaalkiisa illaa iyo inta siyaasadaha liisanka ee ay soo jeedisay Microsoft la aqbalo oo la ixtiraamo; Kadibna waxaan kuu soo jeedin doonaa inaad raacdo dhowr talaabo oo isku xigxig ah si aad ugu soo dejiso Windows 10 lambarka taxanaha ah ee ay bixiyeen isla dadka ku jira Microsoft.
Furo biraawsarka Internetka ee aad inta badan kula shaqeysid koontadaada Microsoft (oo noqon kara Hotmail iyo Outlook.com).
Ku soo gal aqoonsiga aad ku heli karto adeegyadan midkoodna.
Hada tag bogga rasmiga ah ee Microsoft Gudaha.
Waxaad ka heli doontaa shaashad la mid ah tan aan hoos ku soo bandhigi doonno, adigoo gujinaya batoonka ku qoran «Ku biir Hadda«.
Mar dambe, waxaa lagugu casuumi doonaa inaad aqbasho siyaasadaha shatiga isticmaalka Windows 10 ee ay soo jeediso Microsoft.
Daaqada xigta waa inaad gujisaa xiriirka hoose (buluug) oo kuu oggolaanaya inaad u booddid daaqadda soo dejinta ee Windows 10.
Madaxa u hoose ilaa xulo sawirka ISO ee Windows 10 inaad xiisaynayso inaad soo degsato.
Xagga kore waxaa ku yaal lambarka taxanaha ah ee ay tahay inaad u adeegsato rakibidda 10-ka, oo ay tahay inaad nuqul ka sameyso oo aad ku dhejiso dukumiinti si aad ugu keydiso kombiyuutarkaaga gaarka ah.
Talaabooyinkan fudud iyo waqti dheer kadib waxaad kuheleysaa kumbuyuutarkaaga shaqsiga ah laga soo dejiyey sawirka Windows 10 ISO; Waqtigan xaadirka ah waxaa jira oo keliya luuqado yar oo loo heli karo noocyadan tijaabada ah ee nidaamka hawlgalka ee Microsoft, sidaa darteed waxay qaadan doontaa waqti in luuqadaha kala duwan (oo ay ku jiraan Isbaanishka) si rasmi ah loogu soo jeediyo.
Miisaanka ugu dhow ee sawirka ISO wuxuu ka sarreeyaa 3 GB, marka waa inaad haysataa meel kugu filan oo ah meesha aad ka soo degsaneyso faylka la yiri.
Beddelka lagu rakibo Windows 10
Mar alla markii aad soo degsato Windows 10 waa inaad sii wadataa rakibidda iyada oo loo eegayo heerkaaga waayo-aragnimo; dhinaceena waxaan kugula talin karnaa dhowr dariiqo oo lagu fulin karo howshan, kuwaas oo ah kuwa soo socda:
Nidaamka hawlgalka Virtual. Waad isku halleyn kartaa mid ka mid ah codsiyada badan si aad u abuurto mashiin dalwaddo ah iyo meesha, waa inaad isticmaashaa sawirka ISO (iyo sidoo kale nambarka taxanaha ah) ee aad horay u soo dejisay.
Nidaamka qalliinka boot-ka ah. Waxa kale oo aad ku rakibi kartaa Windows 10 kombiyuutarkaaga adoo dooranaya qayb gaar ah oo loogu talagalay saameynta; Maaddaama ay tahay nooc tijaabo ah, 20 GB ayaa laga yaabaa inay in ka badan ku filnaato qaybtan meesha aad ku rakiban doonto nidaamka hawlgalka.
Beddelka labaad ee aan soo sheegnay, waa inaad u baahan doontaa u wareeji dhammaan waxyaabaha ku jira sawirka ISO adoo adeegsanaya usha USB-ga haddii kombiyuutarkaaga gaarka ahi uusan lahayn saxanka saxanka. Kiiska noocan ah, waxaan kugula talineynaa isticmaal qalab khaas ah, oo aan xitaa horey uga soo hadalnay.
Cusboonaysii: Maqaalkani waxaa la qoray 2014 markii Windows 10 wali uu socday. Haddii aad rabto macluumaad dheeri ah oo la cusbooneysiiyay booqo qodobkan si aad u rakibto daaqadaha 10
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Software » Sida loo soo dejisto Windows 10 oo ay ku jiraan lambar taxan ah
Shatiga miyaanu dhicin Abriil 2015?
Jawaab Renzo Collantes Valer
Waxaan qiyaasayaa inay tahay. Laakiin lambarka shatiga ee la bixiyay, dhammaan tijaabooyinkeyga rakibidda (Guri iyo Ganacsi) weligood lama weydiisan. Waad ku mahadsantahay macluumaadka, waxaan horeyba uheynay tabaruc dheeri ah oo wanaagsan oo aan dhamaanteen tixgelin doono si hubaal ah.
yaa i siiya daaqadaha 8.1 liisanka hawlgelinta ee faaa
Maqaal aad u fiican. Aad ayey u xun yihiin ma bixiyaan nooca Isbaanishka, mise luqadda waa la beddeli karaa?
Jawaab Juan Chirinos
Gacaliye Juan, ma jiro xirmo weli Isbaanishka, laakiin MIcrosoft ayaa hubaal u soo jeedin doonta inay tahay xirmo ay ku soo dejiso cusbooneysiin ama feyl ahaan. Waxaan u soo jeedin doonaa tusaale ka mid ah Windows-ka guud ahaan, in kasta oo lagu dabaqo Windows 7 waqtiga la sheegay xirmada ayaa la soo bandhigayaa. Salaan kadib waad ku mahadsan tahay booqashadaada.
Waad ku mahadsan tahay Mr. Rodrigo jawaabtaada wanaagsan iyo dareenkaaga. Si daacad ah.
Jawaab Juan Pablo Chirinos
ma jiraa qatar dhab ah oo ku jirta kombuyutarkaaga?, waxaad ogtahay inaad tahay beta iyo tijaabin,. mahadsanid!
Khatar ma leh maxaa yeelay waa nooc rasmi ah oo aan burcad-badeed ahayn. Waxaan kugula talineynaa inaad ku rakibto Windows 10 qaybta qashinka si aad ula shaqeysid qalabka wax ku oolka ah asal ahaan oo aadan u dhigmin Waad ku mahadsan tahay booqashadaada.
Su'aashaydu waa sababta oo ah haysashada laba boot oo leh Linux, haddii w10 bootku wax walbaba kugu dhibayo, su'aashaydu waxay tahay haddii tani u dhici karto sidii beta, oo leh isbeddelada aan qiyaasayo in wejigani yeelan doono! ,, mahadsanid
Shakhsiyan, waxaan haystaa Windows 7 Ultimate, Windows 8.1 Pro iyo Windows 10, markaa 3da ikhtiyaar ayaa ka muuqda Boot Manager. Ma garanayo wax ku saabsan Linux-ka bootloader-ka, maadaama ay run tahay waxaad sheegayso, in mararka qaarkood Windows-ku waxyeelleeyo. Ma garanayo haddii lagu samayn karo kiiskaaga, laakiin Linux ayaa guud ahaan lagu rakibay dhamaadka, si Maareeyuhu u guuleysto. Waad ku mahadsantahay xiisahaaga iyo booqashadaada waxaanan rajaynayaa in qof ku takhasusay Linux, uu bixin karo faallo ku saabsan arrinta.
Rodrigo, ma ii sheegi kartaa haddii ay lagama maarmaan tahay in lagu qasbo xallinta?
Marc ... looma baahna in xoog lagu xaliyo, maxaa yeelay waxaad si deggan ula shaqeyn kartaa kan aad waligaa la shaqeyn jirtay. Dabcan, tani waxay kuxirantahay haddii Windows 10 aqoonsaday kaarkaaga sawirada. Kiiskeyga wax dhib ah ma qabin wax dhib ahna kuma qabo 1920 × 1080 px. Salaan iyo mahadsanid faallooyinka iyo booqashada.
Waxaan haystaa Windows 8.1 Miyaan ku rakibi karaa W10 dusha sare ama waxay u baahan tahay in la qaabeeyo
Jawaab JR Marklin
Weligaa ha ku cusboonaysiin nooc deggan oo leh nooc tijaabo ah. Waxaan kugula talineynaa inaad ku sameysid qayb ka mid ah disk-ka adag maareeyaha diskiga Windows si aadan u lumin macluumaadka (waxaan qiyaasayaa inaad taqaanid sida loo sameeyo) ka dibna rakib Windows 10 Waxaad sidoo kale abuuri kartaa mishiin la taaban karo inkastoo, waa aan waxtar lahayn. Salaan iyo mahadsanid booqashadaada iyo faallooyinkaaga.
Ugu horreyntii wax ku saabsan faallooyinka GNU / Linux, Windows wuxuu adeegsadaa bootloader (ma xasuusto magaceeda: S) iyo GNU / Linux wuxuu adeegsadaa kuwa kale, maareeyaha Windows-ku ma waafaqsana GNU / Linux, markaa haddii aad rakibto Windows Dhinac qaybinta jirta, maareeyaheeda ayaa tirtiri doona GRUB oo bilawga qaybintaada wuu baabi'i doonaa oo dib u soo kabashada GRUB waa jahwareer wanaagsan, waxaa la doorbidaa in marka hore Windows la rakibo kadibna GNU / Linux.
On Windows 10, anigu ma rakibo, haddii Windows 8.1 aan haysto dhibaatooyin xallin iyo darawalnimo, intee in le'eg ayaan ku yeelan doonaa mid cusub oo aan xasilloonayn sababtoo ah horumarka?
JJ, haddii aad leedahay Windows 8.1 waxaan kuu sheegi karaa inaad hadda isticmaali karto Skype Translator… Waxaan helay ogeysiiska si aad hadda ula sheekeysan karto asxaabta ka socota wadamada kale adoo u turjumaya waqtiga-dhabta ah. Salaan iyo mahadsanid faallooyinkaaga.
Waxaan hada bilaabay bilaabida rakibayaasha Isbaanishka. Haddii la burburiyo Grub, hab wanaagsan oo lagu soo kabsado waxay la noqon kartaa qalabka bilaashka ah ee EasyBCD.
Waxaan u maleynayaa in laptop-kayga 6400 Dell Inspiron 2007 (4GB iyo SSD) ay u socon doonto sida tallaalka oo kale. W7 duqsi….
Subax wanaagsan ayaan rakibey rakibida bilaashka ah hada waxay i weydiineysaa inaan galo fure ansax ah mana haysto sidaan yeelo
Ku jawaab dilia pernida
Waad salaaman tihiin, waxaan qabay su'aal cidina xal u helin. Waxaan haystaa daaqad 7-bit windows 32 ah (in kasta oo kumbuyuutarkaygu taageero 64 jajab), waxaan u cusbooneysiiyay daaqadaha 10 oo sida iska cad waxay i dhigtay nidaamka 32-bit. Ma heli karaa daaqado 10 64-bit ah si uun, marka laga reebo bixinta? Furaheygu waa asal
Ka soo degsanaya degel kasta. Isku day inaad nuqullo nuqul ah ka sameysid waxyaabahaaga kahor ... haddiiba ay dhacdo.
Ku jawaab javicalavera7
Rodrigo, sidee ku heystaa su'aal? Anigu xirfad badan ma ihi laakiin sidoo kale doqon ma ihi, laakiin waxaa jira waxyaabo aanan aqoon oo aan jeclaan lahaa haddii aad ka jawaabi karto, waxaan hayaa mashiinka Asus waana yimid aniga oo leh nidaamka Windows 7 ee ku shaqeeya Isbaanishka waxaana loo cusbooneysiiyay Windows 10 waxaanan aqriyay inaad ku yeelan karto wax ka badan hal nidaam qalliin mashiinka miyay noqon kartaa? Sideen ku sameyn karaa si aan taa ku guuleysto? Iyo su'aal kale ayaa ah sideen u kala qaybin karaa diskigayga anigoon waxba lumin (sawirro, fiidyowyo, iwm.) Haddii aan horeyba ugu rakibay nidaam hawlgal ah, ma ogi haddii aad hadda i fahantay iyo wixii ka dambeeya, ka xumahay dhibaatada iyo aad ayaad u mahadsantahay
Jawaab Richard ¨villero¨ Fernandez
Waad salaaman tahay, galab wanaagsan, markaan cusbooneysiinayo, waxay i siisay ikhtiyaar ah qashin qubka, kaas oo ah mid la cabi karo, laakiin waxay i weydiineysaa liisanka ama ka tagtaa haddii aan ka tago, maxaa dhacaya waan heli karaa ama ku shaqeyn karaa mashiinka sidaas
Jawaab Ricardo Rivera
Musalsalkaas aniga ima shaqeynayo. Qof ma i siiyaa beddelaad ama keygen?
Ku jawaab Gaspi
Salaan wanaagsan ,,, aad baad ugu mahadsantahay wax ku biirintaada laakiin erayga sirta ah ma muuqdo, kaliya waxaan arkaa MediaCreationTool ..
Ku jawaab HernanCamilo
yaa i caawiya waxaan ubaahanahay fure daaqadaha 10
Ku jawaab nary70
nambarka taxanaha ahi ma muuqdo
Ku jawaab sek